काठमाडौं उपत्यकामा नै बढ्यो यति धेरै संक्रमित! – PathivaraOnline
Home > समाचार > काठमाडौं उपत्यकामा नै बढ्यो यति धेरै संक्रमित!
बितेको २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा थप ४८१ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमा काठमाडौंमा ३९३, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३० जना रहेको मंगलबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १०६९ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । महिला ३४४ र पुरुष ७२५ गरी १०६९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ४० हजार नाघेको छ । यस्तै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या २३९ पुगेकाे छ ।